UArturo Garcia | | Iiselfowuni, Reviews
Enkosi kubafana abavela kwaSony Ericsson sikwazile ukuba ne-Xperia Ray iiveki ezimbalwa, ngeli xesha ndizamile ukuvavanya yonke imiba yefowuni, kweli candelo lokuqala lokujonga siza kujongana nayo yonke into enxulumene izixhobo zefowuni, ubugcisa bayo, izinto zayo zangaphakathi kunye nescreen sayo, funda ukuze wazi ilungu elitsha losapho lwe-xperia
Inkangeleko kunye neempawu
Uluhlu lweSony Ericsson (SE) Xperia luphawulwa ngohlobo oluthile, ukuqaqamba okugqityiweyo, ii-angles ezilungileyo, kunye ngokubanzi Uyilo olwahlulwe ngokuthelekiswa nabanye abavelisi. Le Ray ayizukubangaphantsi kwaye zonke iinkcukacha zayo zangaphandle zisenza sicinge ukuba sinesiphelo se-SE ezandleni zethu. Ngokucacileyo, eyona nto iphambili eyahlukileyo kule modeli bubungakanani bayo kuba inemilinganiselo kunye nobunzima:
X x 111 53 9.4 mm
Njengoko ubona kulo thelekisa neGPS S II umahluko uyancomeka, ubungakanani bokugqibela besixhobo buncinci ngenene, inkcukacha abo baya kuzixabisa ezinezandla ezincinci okanye iipokotho.
Ukuba sijonga ngononophelo kulwakhiwo lwaXperia Ray kwinxalenye ephezulu sifumana i-3.5mm jack kunye neqhosha lokutshixa, ngasekhohlo siya kuba nesinxibelelanisi se-usb, mhlawumbi yenye yezona zinto zintle zobuhle kule smartphone, kuba kunjalo Inokuba ifihliwe ngandlela thile, ime ngokungathandekiyo kwinkangeleko elungileyo ngokubanzi. Kwicala lasekunene sifumana amaqhosha evolumu, mancinci kwaye kunzima ukuwacofa, kwaye ngasemva sinekhamera kunye nesigqubuthelo sebhetri, esuswa ngokulula kwaye ibekwe, inokubonakala okuqaqambileyo kwaye kubonakala kunzima ukukrwela. Kufuneka iqatshelwe into yokuba i-microSD ayinakutshintshwa ngaphandle kokususa ibhetri, yiyo loo nto ucima ifowuni.
Ekugqibeleni ngaphambili sinayo Isikrini esingu-3,3 ” (esiza kuthetha ngayo kamva), ikhamera yangaphambili kunye namaqhosha asezantsi. Oku kuxubekile, kuba sifumana amandla amabini (imenyu kunye nomva) kunye neyomzimba (Ikhaya) enokuthi ngamanye amaxesha kube nzima ukuyicinezela, kuba ezinye ezimbini azidingi xinzelelo ukuze zisebenze. Enye into esiyifumana ngaphambili yile i-LED yesaziso, ejikeleze eli qhosha lasekhaya sithethe ngalo, ayinakuguqulwa yisoftware ke siyakuba nemibala eyahlukileyo kwezo zaziso zichazwe ngumenzi.
Kuyacaca ukuba sinyathelo elinye ngezantsi kweArc xa siqonda ukuba apha akukho qhagamshelo lwe-HDMI okanye iqhosha elizinikeleyo kwikhamera, nangona mhlawumbi oku kunokuba ngenxa yesidingo sokuqulatha ubungakanani. Njengayo yonke i-2010 Xperia ayinayo inzwa yokuqaqamba.
Njengakulo lonke uluhlu lwe-SE, kuye kwagqitywa Sukukhetha isiseko esiphambili kunye neempawu zobuchwephesha kwesi sigxina zilandelayo:
Iprosesa ye-1 GHz Scorpion
Imizobo yeAdreno 205 yemizobo
Kakhulu imizobo kunye neprosesa zisebenza kakuhle kwinkampani, njengakwezinye iitheminali, Khange ndibone zijezi okanye lags Ngexesha lokusebenza kwefowuni ngokubanzi.
La umgangatho weaudio uhloniphekileMhlawumbi bendinethemba lokufumana into ebhetele kwinkampani enje ngeJapan esele isaziwa ngokusebenza ngezixhobo zesandi. Apho ukuba siza kuqaphela uphuculo olubalulekileyo kwisithethi sangaphandle, esibulela itekhnoloji ye-XLOUD yakwaSony ephucula ukusebenza kwayo.
Kuyamangalisa oko kubungakanani obuncinci obunjalo babenako ukulungiselela izixhobo ezilungeleleneyo, umahluko kwisiphelo esiphakamileyo ngokubhekisele ekusebenzeni kwesiqhelo awukho mkhulu njengoko umntu unokulindela, into esiza kuthetha ngayo ngakumbi kwinxalenye yesoftware yolu hlaziyo.
Elinye lamandla esi sixhobo siscreen sayo, ikakhulu ngenxa yezizathu ezibini:
Isisombululo se-854 × 480 kwiscreen se-3.2, esisinika Ukuxinana okuphezulu kakhulu kwe-pixel (297ppi), ukufumana imifanekiso ibonakala ibukhali nokuququzelela ukufundwa kwetekisi.
Itekhnoloji ye-Bravia LCD yakwaSony Ericsson, nangona mhlawumbi ingaphezulu kokuthetha ngale teknoloji ndicinga ukuba masithethe ngayo Umgangatho ophezulu kakhulu wezikrini kuluhlu lweXperia, kunye nabamhlophe abamangalisayo kunye nemibala yokwenene.
Inkangeleko yesi sikrini yahluke kancinane kuleyo siqhelene nayo, kuba inde noko kunesiqhelo. Inkqubo ye- Eyona ngxaki inkulu kwezi LCD ikwiingile zokubukela, imibala iphelelwa ngamandla, ithoba isidima kwaye ihlanjwe ngokukhawuleza ukuba ubaleke kancinci kwi-90º, into apho itekhnoloji ye-AMOLED yomelela. Kwelinye icala, abamnyama, into apho bendilindele ukuba umahluko mkhulu, awahlukanga kangako, ubungakanani bohlukile (grey mnyama kakhulu) kodwa ekusebenzeni ngokubanzi akubonakali kangako.
Zonke ezinye iingxaki ezincinci endiye ndadibana nazo zibangelwa bubungakanani obuncinci kunye nokusonjululwa okuphezulu, kwaye loo nto ngamanye amaxesha iitekisi zinokuba zincinci kwezinye iiapps, kuba ziyilelwe izikrini ezinkulu.
Ukuthathela ingqalelo oku, oko kukuthi, ukusikelwa umda kwetekhnoloji yeLCD kunye neengxaki zescreen esincinci, sinokuthi kuphela isikrini siyamangalisa kwaye kuyonwabisa ngokwenene ukubona iithagethi zokwenyani kwakhona Emva kwethutyana ubona abamhlophe oluhlaza okanye ohlaza okwesibhakabhaka, enkosi kulungelelwaniso olulungileyo kunye nokusombulula okuphezulu, zombini iifoto kunye nevidiyo zibukeka zintle kakhulu.
Ungabona umboniso olungileyo woku xa kuthelekiswa endikwenzileyo kunye ne-SGSII yam:
Kwinxalenye yesibini yolu hlaziyo siza kuthetha ngokuziphatha kwale Xperia Ray, umgangatho wekhamera yayo kwaye siza kukunika olokugqibela uluvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Uvavanyo lweSony Ericsson Xperia Ray (I)
ikhonkco d uhlalutyo lwakho lwesibini?
I-Polaroid iyasimangalisa sonke ngekhamera yayo ye-Android